Yakarema Fenicha, Yokurara Mubhedha uye Sofa Mugadziri | James Bond
Luxury Classic Fenicha
Chisikwa chega chega ibasa rehunyanzvi.
James Bond Classic magetsi anotenderedza tafura yekudyira uye danda rakasimba nepiyano resin pendi Brown JF522
DESISI Yakatsetseka brown yegoridhe uye huni yakasimba ine piano resin pendi magetsi anotenderedza kudya anokwanisa DZIDZO YENZIRA Chinyorwa: French beech Kukura: 220W × 220D × 76H 300W × 300D × 76H 380W × 380D × 76H Ruvara rwehuni: BHURAWUNI
James Bond Classic sofa dhizaini 14k goridhe uye yakasimba Gungwa bhuruu A2825
James Bond Fenicha yave ichitarisa pane yakasarudzika mhando yemhando yemhando yemakore gumi nemasere. Vatengi vazhinji vanoti James Bond Fenicha inogadzira fenicha yemasikati yakafanana neItaly Classic fenicha. Ehe, isu tinotumira timu yedu yekugadzira uye timu yekugadzira kuItari gore rega rega kuti vadzidze kugadzirwa kwehunyanzvi uye kugadzirwa kweiyo midziyo yakanakisa yeItari, kuitira kuti midziyo yemhando yepamusoro inogona kuunzwa kune vatengi pasi rese.Yedu yakasarudzika sofa yakaiswa yakakurumbira nekuti inobatwa zvakanaka mune zvese zvese, ichiratidza manzwiro akaomarara, kunzwa kwakasarudzika uye kunzwa kwechimiro.
Misha yakanaka ine yakanaka classic fenicha - yakagoverwa nevatengi kubva kuNigeria
Vakanaka uye vanoshamisa villa vanoda kuenderana nemidziyo yekirasi ine kuravira uye iyo yakafanana luxury. Kutenda kune vatengi veNigeria yekuvimba kwavo uye kufarira kweiyo James Bond Fenicha, fekitori yedu ine nhoroondo yemakore makumi matatu nemasere. Maitiro ekugadzira anokura kwazvo, uye kunaka kwacho zvakare kwakanaka kwazvo.Iwo midziyo yekirasi yemidziyo yeJames Bond inotengeswa kune makumi matatu nemashanu nyika, kufukidza mazana mashanu emhuri. James Bond Fenicha yave imwe yeiyo yepamusoro 10 classic ficha muChina uye iyo yepamusoro makumi maviri emhando fanicha bross munyika. Ndinovimba vazhinji vatengi vanogona kusarudza james bus bus bustil mhando yemhando yepamusoro fenicha!
Italian mutengi villa classic fenicha - kubva kuna James Bond Fenicha
Tenda vatengi veItaly kuti vatsigire uye nerudo rwemhando yedu yeJames Bond. Isu takasangana zvakanyanya mukugadzirwa kwemidziyo yemhando yepamusoro, nekuti isu tine makore gumi nemasere ekugadzira ruzivo, uye isu tasvitsa zvakare michina yekugadzira yeItaly neItaly yekugadzira Italia yekugadzira. Inogamuchira International Standard Standard Costivation Pendi, inoshandisa yakakwirira mhando zvinyorwa, pamwe nemakore gumi nemashanu ane ruzivo rwekuvezwa kwechiitiko cheCraftsmanJames Busiture Fenicha ikozvino mune dzimwe nyika senge, inoshandiswa, isu ticharamba tichishanda nesimba, rambai kuburitsa midziyo yakanaka kwazvo yekupa vatengi vazhinji!
South Africa Quality Project - Luxury Classic Fenicha kubva kuna James Bond Fenicha
Chekutanga pane zvese, ndinoda kuti titende kune vatengi veSouth Africa kuti vatsigire, pamwe nekutsigira kwavo uye kuda kwavo Jameson fenicha. Iwo anotevera midziyo yemhando yepamusoro inopihwa naJames Bond Fenicha, chimiro chedu chepamusoro chatotengeswa kune makumi matatu nemashanu nyika. Tiri kuedzawo kurega vatengi vakawanda munharaunda dzakawanda tizive yedu james Bond fenicha uye fenicha yemhando yepamusoro nekuravira uye kuumbwa.
Hong Kong Mutengi mutengi - mhando yemhando yemhando kubva kuJames Bond Fenicha
Kugutsikana kwevatengi ndiyo yedu huru chinangwa simba. Icho chinangwa chedu kugadzira, kuburitsa uye kutengesa fenicha yemhando yemoyo wedu. Pese patinoita zvakanaka kwazvo kupedzisa basa ratakapiwa nevatengi zvakare uye zvakare, iro rakanaka, rakakwirira-mhando, rakakosha, pfungwa yekuziva yemhuri yakanaka mushure meimwe mhuri yakanaka mushure meimwe mhuri.James Bond Fenicha ane Nhoroondo, tekinoroji yedu yekugadzira yakakura, tekinoroji yedu iri kuwedzera uye yakasarudzika, sarudza ficha yakakwira, shuwa ficha, isarudzo yakanaka kwazvo!
James Bond kupa yakagadzwa muna 2003 mune inozivikanwa nyika fenicha zvigadzirwa - Longjiang dhorobha, shunde dunhu, foshan guta, inofukidza nharaunda inopfuura zviuru zvezviuru mamaira, iyo iri kugadzirwa, kutengesa kwekumusoro-kunopera imba kugovera European classical sofa , tafura, tei tafura dzakateerana zvigadzirwa zvemabhizimusi akazvimirira. Kwemakore gumi nematanhatu, James Bond achipa zvinoteedzera kuenderana nemitemo yetsika, Akazvipira kugamuchirwa kwemamiriro, tsika yakajeka yemakambani uye chimiro chakasimba chekusimudzira, uye Gain kuzivikanwa kubva kuindasitiri, akakunda "Pamusoro pegumi light indasitiri muChina", "National chibvumirano uye bhizinesi rechikwereti "," Guangdong mudunhu kwemakore gumi nemashanu akateedzana kutevedzera chibvumirano nemabhizinesi echikwereti "" Pamusoro gumi eEuropean America brands yeChinese fenicha "zita.
James Bond kupa mukati kwakatangwa muItari neropa rakanaka, vanoomerera kutsika, kusarudzika kusarudzwa kwezvinhu, zvakanatswa, vachishandisa yakachena Italy yekugadzira maitiro, kuti ive nemhando yepamusoro. Kubva pane yakasviba matanda emuti veneer kune yakajeka uye inopenya piyano pende kumusoro, inokosha uye isingawanzo paneler ... Pasina kusiyanisa kuchenjera mubatanidzwa vogue kukurudziro uye yechinyakare kupenga, regai fenicha ive iyo inoshongedza gem inoshongedza imba. James Bond kugovera mhizha inogara nhaka yemazana emakore ehutsika uye yetsika nhaka, inokonzeresa kushamisika nekurudziro mukugadzirwa kwehunyanzvi, uye inoshingairira kugadzira iyo yakanyanya kunaka mabasa emabasa.